Harem-bakoka ara-kolontsaina sy ny alika mirenireny, samy voadona amin’ny fiverenan’ny Formule1 ao Bakou · Global Voices teny Malagasy
Vidiana lafo ny hazakazaka mba te-ho fantatry ny olona
Voadika ny 30 Avrily 2019 2:42 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Ελληνικά, Italiano, Français, Español, English
‘Fanasàna sarotra holavina’ Pikantsary avy amin'ny doka ofisialin'ny Grand Prix 2019 SOCAR [llay orinasa nasionaly mpamokatra solika] Azerbaïdjan Formule 1
Mitatao eo ambonin'ny ranomasina Caspienne, ny Grand Prix 2020 Formule1 hatao ao Azerbaïdjan, ho eo amin'ny làlana ao an-tanànan'i Bakou no hihazakazaka, hahafahan'ireo mpankafy hahita, tsy ny maritrano maoderina fotsiny, fa koa ireo tranobe manana tantara manodidina ilay tanàna indostrialy ao Bakou. Aoka ianao hilona ao anatin'ny fifaninanana hazakazaka Formule1 toa an'i Bakou miaraka amin'ireo lazambidy ofisialy natokana ho an'ny “Expériences F1″. Ao anatin'io lazambidy fifanekembarotra io dia ahitàna tapakila fidirana, fahazoana miditra amin'ny fomba fiainan'ilay hazakazaka miaraka amina fitsidihana misy mpitaridia mitety ireo tranoheva ary ny lalana voasoritra hihazakazahana, fitetezana an-tongotra tsy manam-paharoa ny toerana fiaingàna sy maro hafa koa !
Amin'ny alàlan'ireo teny ireo no ivarotan'ny tranonkala ofisialin’ny Grand Prix ny hazakazaka iray mamakivaky an'i Bakou amin'ny 28 Aprily, izay, araka ny tahotr'ireo maro ao an-drenivohitr'i Azerbaïdjan dia manohintohina sahady ny iray amin'ireo zava-mahasarika manandanja indrindra ao an-tanàna : ilay Tanànany Tranainy sarobidy.
Taona roa nifanesy izao i Bakou no nampiantrano hazakazaka Formule1. Ny governemanta tsy refesimandidy ao Azerbaïdjan dia mahita fotoana fanararaotra ao anatin'ilay hetsika ara-panatanjahantena mba hampiroboroboana ny endrika ijerena ny fireneny, taorian'ny nandraisany ny Eurovision 2012 sy ny Lalao Eorôpeàna 2015. Bakou koa no hikarakara ny lalao famaranana ny Europa League, ilay fifanintsanana eorôpeàna faharoa malaza indrindra amin'ny baolina kitra, amin'ny 29 May.
Saingy raha ireo tranobe manana tantara ao afovoan'i Bakou no indraindrain'ny F1 ho ampahany amin'izay zavatra mahasarika ho an'ireo mpankafy, na avy eo an-toerana izy na avy any ivelany, tsy nitaredretra ireo mponina ao Bakou nanohitra teny anaty tambajotra sôsialy ny zavatra toa hita fa fanavaozana mitavozavoza ilay Tanàna Tranainy.
Iray tamin'ireo mpampiasa ny fampahalalambaovao sôsialy i Ibrahim Emre, niteny fa rehefa vita ny Formule 1 ao Bakou :
Ajanony ny Formule 1 ! Tokony hiaraka hiteny isika rehetra mitambatra hoe tsy ilaina ny fikarakaràna hazakazaka Formule 1 [eto Azerbaïdjan]. Tokony handà isika, satria tsy ananantsika ny fiahiana ara-pahasalamàna, tsy misy rafitra famoahana rano maloto, rehefa avy ny orana dia ny tanàna manontolo no tondraka sns.. Fa mavesa-danja kokoa, an-tapitrisa ireo olona miaina fahantràna sy tsy manana asa. Noho ny tsy fahampiana ara-bola, mahafoy ny nofinofiny ireo tanora, afoiny ny hoaviny. Miaraka amin'ilay fampiasambola mitentina 150 tapitrisa manats, tokony ho vitantsika ny manana rafi-panabeazana maimaimpoana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, isantaona ve isika mampiasa vola amin'ny Formule 1 fa tsy amin'ny fampianarantsika ? Nahoana? Satria ny karazana hetsika toy io dia manao izay hahafantarana ny firenentsika eran'izao tontolo izao. Ny toekareny, ny fampianarany, ny tafika ao aminy, ny fahasalaman'ny vahoaka, fa tsy ny hetsika tsy misy fotony tahaka ireny no tokony entina hampahafantaran'ny firenena iray ny aminy.
Iray monja ihany i Emre amin'ireo mponina marobe ao Bakou tonga namelabelatra ny ahiahin'izy ireo tao amin'ny Facebook. Ny sasany aza nangataka fifonana mihitsy tamin'ilay Tanàna Tranainy.
Arahaba, ry Tanàna Tranainy, manao ahoana ianao izay? Haiko fa tezitra ianao. Ny setroky ny hena may manempotra anao sady manajamba ny masonay. Tianay toy ny itiavanay anao ny mofo tsy misy lalivay. Mahazatra anay ny mipetraka eo ambanin'ireo tambohonao. Saingy ankehitriny, mba hahazoana izany, dia tsy maintsy izahay miditra anatin'ireo toerana tsy hay ahoana [ilazana an-kolaka ireo toerana fisakafoanana mitsiry toy ny anana manamorona ny mandan'ilay tanàna tranainy]. Izahay no manempotra anao. Satria tsy tia anao izahay. Voajanahary kokoa ho anay ny aqlay (ilay vato fanaovana asa fanorenana). Sarobidy kokoa ho anay ny qutab [mofo fisaka nasiana sesika]. Tianay mihoatra noho ny tantarantsika ny kebab. Satria lalaina kokoa noho ny rahalahy ny kibo … Miaraka amin'izay fanajàna rehetra azo atolotra, Tural Yusifov, mpahay tantara.
Ny lahatsary eto ambany no mamintina ny asa tao ao an-tanàna ZZZZZZZ.
Ny marina inona ?
Avy hatrany dia nolavin'ilay fikambanan'ny tanora avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna ao Azerbaïdjan ireo fanondroana milaza fa misy ampahany amin'ilay Tanàna Tranainy no an-dalam-paharavàna, tamin'ny namoahany ilay lahatsary eto ambany nomena lohateny hoe: “Ho an'ireo rehetra mamafy vaovao diso momba ny famotehana ireo tamboho tranainy ao amin'ny “Tanàna anatiny”, ity ny valinkafatra miendrika felaka tehamaina”.
Ilay “felaka tehamaina” ho an'ireo kiana resahan'ilay lahatsary dia manondro ny antsafa iray nataon'i Rahib Azeri, llehiben'ny sampanasa fampiahalalambaovao ao amin'ny Tahiry Manantantara sy Momba ny Maritrano ao amin'ny Fanjakana, ao amin'ilay “Tanàna Tranainy”, andry iray ao anivon'ny governemanta.
Ao anatin'ilay rakitsary, samy omeny toky ireo mpitatitra vaovao sy ireo mpijery fa ny asa natao tao anatin'ilay tanàna tranainy dia singa iray amin'ireo asa fanatsaràna ireo trano fisakafoanana sy fisotroana kafe. Tsy misy mihitsy manimba ireo tamboho, hoy izy nanamafy.
Betsaka no nahita hoe tsy maharesy lahatra ilay fanazavany. Ity no nozarain'ilay mpanakanto Gunduz Aghayev ho setrin'ilay lahatsoratra: ZZZZZZZ
Marihan'ilay sary ny fahasamihafàna eo amin'ireo vato nampiasaina tamin'ireo asa fanavaozana :
Olana lehibe ao Azerbaïdjan ilay vakoka, Azerbaidjan izay toerana anomezana lanja kokoa ny fampidirana ny tombony azo amin'ny solika raha oharina amin'ny fikarakaràna ireo trano tranainy.
Ilay malaza amin'ny fiarovana zon'olombelona, Aslan Ismayilov, dia nizara ity lahatsary eto ambany ity mba hanindriana ny fahataràn'i Azerbaïdjan manoloana ireo firenena hafa raha resaka fikarakaràna ireo toerana manantantara ao aminy.
Toy ilay Tanàna Tranainy ihany, iharan-doza ihany koa ireo alika mirenireny. Ny 16 Aprily, nisy zazakely telo taona nokaikerin'ny alika mirenireny tao Bakou, mahatonga indray ireo biby mirenireny ho lasa olana nasiônaly. Nangatahan‘ny solombavambahoaka iray ny hamonoana ireo alika rehetra mirenireny, mampahatsiahy ilay fomba fanaon'ny sovietika ankamamiany. Nalaky naparitaky ny polisy kosa ireo mpiaro biby izay nifamory teo anoloan'ny lapan'ny tanàna
Nanaraka taorian'ny fanomànana ireo Lalao Eorôpeàna 2015 ny fanaovana herisetra tamin'ireo biby eny an-dalambe, ary nahazo fandrakofambaovao erantany mihitsy aza. Toa miverina indray ny tantara. Tsy hoe ny tantara no miraikitra be ao an-dohan'ireo mpankafy F1 izay nandoa ny tapakilan-dry zareo teo anelanelan'ny 51,19 sy 3.928,64 euros.
Tambiny ho an'ilay vidiny lafo ny fisian'ny fehezana “aventure” mandritra ny andro telo, izay mametraka ireo mpijery ho “tonga dia eo ambonin'ilay lavaka be”, ary “miantoka ny fahazoanao fahatazanana tsara indrindra”. Mety ho tena lafo lavitra ny sandan'ilay hazakazaka ho an'ilay Tanàna Tranainy ao Bakou .